एस्टेबन गोन्जालेज पुन्स, एलासका लेखक। अन्तर्वार्ता | वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: Esteban González Pons। ट्विटर प्रोफाइल
हो Esteban Gonzalez Pons उनी आफ्नो राजनीतिक क्यारियरका लागि परिचित छन्, तर यो उनको साहित्यिक पक्षमा छ जहाँ उनी भन्छन कि उनी अति सहज महसुस गर्दछन्। उनको पहिलो उपन्यास हो तिनीहरू, जहाँ यो एक संग हुक बन्द जान्छ प्रेम कथा। चाहान्छ धेरै हार्दिक धन्यवाद तपाईंको समय र मलाई अनुग्रह मा महान दयालु यो अन्तर्वार्ता जहाँ उसले हामीलाई गीतको बारेमा र अधिक आत्मीय बारेमा कुरा गर्छ।
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS - साक्षात्कार
साहित्य समाचार: तपाईंको उपन्यासले हामीलाई के भन्छ, तिनीहरू, र किन एक प्रेम कहानी?
इस्टेबान गोन्जालेज पन्स: तिनीहरू एउटा गणना गर्नुहोस् प्रेम कथा girl० को दशकमा जन्मिएकी केटी र केटाहरूबीच यो एक हो पुस्तात्मक उपन्यास, बारेमा हामीहरु मध्ये जन्मेका फ्रान्को अझै बाँचेको वा भर्खरै मरेका थिए, संक्रमण किशोर। कथा सेट गरिएको छ, केही अंशमा भ्यालेन्सिया कोपा अमेरिका, त्यो शहर जुन चमक्यो र हाँसे, र भ्यालेन्सियामा ईंटको स after्कट पछि पनि केही अंश। दुई विरोधाभासी शहरहरू नक्सामा उही ठाउँमा अवस्थित छन्।
EGP: मेरो पहिलो पुस्तक थियो गोल्ड बग पो द्वारा, युवा संस्करणमा। यद्यपि मैले हास्यलाई ट्रान्सफर गरिएको उपन्यासहरूको संग्रह पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ युवा साहित्यिक गहना, जुन संग १ th औं शताब्दीका धेरै साहसिक उपन्यासहरू किशोरावस्थाको रूपमा मेरो उचाईमा ल्याइए Ivanhoe माथि मिगुएल स्ट्रोगोफ o Sandokanउदाहरण को लागी म तिनीहरूलाई सम्झँदा म अझै उत्साहित हुन्छु।
त्यो भन्दा पहिले मैले पढेको पहिलो पहिलो पुस्तकहरू ती मेरा होइनन् तर मेरो काका गिलर्मोको loanणमा तिनीहरू अल्बम थिए। मोर्टाडेलो वा फाइलमेन। किनभने म बचाउँछु कि उनीहरूले एस्टुरियस अफ द आर्ट्सको राजकुमारी एफ। इबाइजलाई दिन्छन्, किनभने म पक्का छु कि स्पेनी साहित्यको अर्को नोबेल पुरस्कार पनि उसको बाल्यकालको पठन मोर्टाडेलो र फाईलमोनमा हुनेछ।
म सम्झन सक्छु किनकि म लेख्छु। सुरुमा, डरलाग्दा कथाहरू पो बाट प्रभावित छ र स्वतन्त्रता को कथाहरु को पहिलो श्रृंखला को नक्कल राष्ट्रीय एपिसोडहरू र को जीवनी नेपोलियन Emil Ludwig द्वारा। त्यसोभए केटीहरू मेरो एकमात्र विषय भए र मैले वास्तवमै नराम्रो कविता लेख्न थालें।
EGP: जब तपाईं सबै पुस्तकहरू पढ्न सुरू गर्नुहुन्छ उनीहरूले तपाईंलाई हिर्काए। एक जवान व्यक्ति को रूपमा मलाई सबैभन्दा बढी ओझेलमा पारेको व्यक्ति हो पङ्क्तिको प्रभुधेरै वर्ष अघि फिल्मले उनलाई अत्यन्त प्रसिद्ध बनायो। जब सिनेमाले मलाई मनपराउने पुस्तकहरूको विनियोजन गर्दछ र यसको कथानकलाई लोकप्रिय बनाउँछ मानौं यसले यसको साहित्यबाट अलग हुन सक्छ। टोलकिएनसँग म यति व्यस्त थिए कि उनले लेखेका थिए केटीहरूको लागि "एलिभिस" मा कविताहरू, र न त मेरो प्रेमिका बन्न चाहन्थे। मलाई लाग्छ कि टोलकिएनले मलाई एक geek बनायो.
EGP: जब तपाइँ साहित्य प्रेम गर्नुहुन्छ Casi मनपर्ने लेखक उल्लेख गर्न असम्भव किनकि प्रायः सबैजनासँग केहि छ जुन तपाईंलाई मोहित गर्दछ। म उद्धृत गर्नेछु Becquer, एक संग महापुरूष, किनकि मँ उहाँसँग धेरै कुरा गर्न मलाई रिसोर्ट गर्दछु। र किनभने म रोमान्टिक हुन चाहन्छु, मलाई थाहा छ म सक्दिन। गर्न पनि डेलीब्सएक यो पहिले नै थ्रेसोल्ड, जुन मैले पढें र स्पेनी भाषा सिक्नको लागि पुनः पढें। र भेले-इंक्लनलाई, जो मसँग अहिले छ मेरो नाइटस्ट्यान्डमा छ।
कविहरु मध्ये, लुइस सेर्नुडा, परी गोन्जालेज र एन्टोनियो कोलिनास, यति फरक, मेरो मनपर्नेहरू मध्येका हुन्। जोन पनि राखौं मार्गारीट कि हामी भर्खरै मरे। ती मध्ये जो अहिले प्रकाशित भैरहेको छ, पूर्ण अभिप्राय बिना, म उनीहरूले प्रकाशित गरेको सबै पढ्छु मानुएल विलास, रूखका विक्टर, लोरेन्जो सिल्भा, जोस ज़ोइलो वा स्यान्टियागो क्यास्टेलानोस, उदाहरणका लागि।
EGP: को पागल नायक प्रेतवाधित क्रिप्टको रहस्य एडुआर्डो मेन्डोजा द्वारा। यो स्पेनी दुष्टको परम्परामा अपूरणीय छ जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यो मूर्ख जस्तो लाग्न सक्छ, तर मलाई लाग्छ कि पिकरेसिक जे स्पेनी उपन्यास होइन।
ईजीपी: जब म जवान थिएँ मैले रातमा लेखें, अब बिहान। पहिले म आफ्नो कल्पनालाई नयाँ बनाउँछु। र उत्तम विचारहरू नुहाउने क्रममा दिमागमा आउँछन्। जब म नुहाउने ठाउँबाट बाहिर आउँछु म ती सबै बिर्सन्छु।
EGP: हिम्मत म यो भन्न छ? मलाई ओछ्यानमा लेख्न मन पर्छ। छ बजे उठ्नु, उदाहरणका लागि, कफी र कम्प्युटरलाई ओछ्यानमा लिनु र मबाट कम्तिमा दुई पृष्ठहरू नलेखुन्जेल त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु। दुर्भाग्यवस म केवल यो सप्ताहन्तमा किन्न सक्छु। तिनीहरू मैले यसलाई विमानहरू र रेलहरूमा र प्रतीक्षालयहरूमा लेखेको थिएँ। यहाँबाट कामका लागि यात्रा गर्दै।
EGP: कविता। म कवि होइन, मेरो बुवा र छोरा हुनुहुन्छ, म कविताको पाठ हुँ, र म सम्मानित छु।
ईजीपी: मैले सकें बुबाको छोरा भेक्टर डेल अरबोल द्वारा र म वास्तवमै यसलाई सिफारिस गर्दछु। र म सुरू गर्छु केहि गर्ने छैन जेनी ओडेल र द्वारा 1794 नट्ट ओच दागबाट, म तपाईंलाई कसरी भन्ने कुरा भन्छु। Y म मेरो अर्को उपन्यास लेख्दै छु, एक डरलाग्दो कथा जुन म सेप्टेम्बरमा प्रकाशकलाई पुर्‍याउने आशा गर्दछु।
ईजीपी: म पक्का छु कि महामारी हामी सबैको लागि आउनेछ जसले हाम्रा सबै कथाहरू लेख्छन्। लेखक के हुन्छ त्यो जीवन हो, के मायने छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » एस्टेबन गोन्जालेज पुन्स, एलासका लेखक। अन्तर्वार्ता